Voadika ny 08 Aogositra 2014 10:13 GMT
Fangon'ny WeChat. Saripikan'ny mpisera Flickr ldjjj. CC BY-NC-ND 2.0
Lazain'ny fitsipika vaovao ihany koa fa ny kaontin'ny mpampita vaovao ofisialy ihany no afa-mamoaka vaovao politika; izay kaonty hitam-bahoaka hafa te-hamoaka vaovao politika dia mila fankatoavana mialoha. Ny kaonty hitam-bahoaka WeChat dia ampiasain'olo-tsotra na orinasa te-hizara vaovao amin'ny mpisoratra anarana aminy. Noho ny lazan'ny WeChat, dia lasa loharanom-baovao ho an'ny vahoaka shinoa ry zareo ireo.
Taorian'ny nanambarana ny vaovao, misy ny mahita azy ho fanitsakitsahana ny fiainan'olona manokana, ary maro no manahy fa mety hanaraha-maso ireo mpiserasera mampiely ny vaovao mitsikera ny governemanta izy ity. Misy manapahefana avy amin'ny Biraom-Panjakana Misahana ny Vaovao an'Aterineto notsongain'ny Beijing News nilaza hoe, “Ny fitsipika dia natao hiarovana ny fahalalaham-pitenenan'ny olom-pirenena.”
Hatramin'ny Mey 2014, niezaka ny hanamarina ny tena anaran'ny (mari-panondroan'ny) mpiserasera ao ambadiky ny kaonty hitam-bahoaka ny orinasa Tencent akaiky azy amin'ny fanerena ny mpitazona ireo kaonty hitam-bahoaka handefa ny mari-panondroana sy ny fampafantarana ny finday. Mialoha ny andefasana ny hafatra any amin'ny mpisoratra anarana aminy, dia tsy maintsy mi-scan ny kaodiny WeChat manokana ny mpamelona kaonty hitam-bahoaka iray. Amin'izay fotoana izay dia azon'ny Tencent fantarina hatrany hoe iza no mampiely ny hafatra “tsy ara-dalàna”.
Efa nisy fanambarana tahaka izao ihany koa natao ho an'ilay mitovy amin'ny Twitter antsoina hoe Sina Weibo tamin'ny herintaona. Na dia mahita lalan-kafa hihodidinana ny lalàna aza ny olona, dia nisy fiantraikany mangidy nanerana ny firenena ihany ny famoretana ny kaonty hitam-bahoaka tao amin'ny Sina Weibo. Amin'izao famoretana vaovao atao amin'ny fampiharana finday izao, dia ampirisihana hijery tsara ny teniny ny olona mialoha ny hamoahany zavatra mety hanohintohina ao amin'ny WeChat.